Isikizi - Wikipedia
Isikizi okanye isiqebheyi yinto eyenzekileyo nepapashwa kuwonke-wonke ingakumbi xa yenziwe ngumntu obalulekileyo okanye usaziwayo ibe kanti eso senzo asilunganga, silihlazo, okanye sisityholo esingokuziphatha kakubi. Isiqebheyi sisenokuba yinto eyenzeke ngokwenyaniso, isenokuba bubuxoki, (esihlala sibizwa ngokuba Template:Broken wikt link) okanye zisenokuba zizo zombini. Ezinye zeziqebheyi kuthiwa xa zichazwa zii-scandalous.
Iziqebheyi zisenokuxelwa Template:Broken wikt link, ezikwaziyo ukuva amahlebo baze bawathubelezise kuwonke-wonke. Esona siqebheyi saziwayo seseWatergate, apho umongameli waseUS u-Richard Nixon wafunyanwa exhasa ekwaqhuseheke izigilamkhuba zabaqhekezi.
Izityholo ezingenabunyani zisoloko zokhikelela ekulahlekeni kwesidima salowo utyholwayo, kwaye zingalitshabalalisa Ikamva lakhe loo mntu. Ngamanya amaxesha iinzame zokogqumap isikizi kuye kudale elinye isikizi elingaphezu kwelo logqunywayo ingakumbi xa oko kogquma kungaphumeleli. Maxa wambi abakho amasikizi athi achaphazele abasebenzi abasebenzela umongameli, abafana nabexesha lolawulo lukaGrant. I- Iran-Contra affair nayo kwakulisikizi elaziwayo elalichaphazela uRonald Reagan nabasebenzi bakhe. Bonke aba babengazange babekwa sityholo salwaphulo mthetho.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-23 Eye Dwarha 2015, kwi-07:45